बालेन र हर्क साम्पाङको नाम उच्चारण गर्दै प्रचण्डले आज त यतिसम्म भन्न भ्याए, होला त यस्तो ? – Annapurna Post News
बालेन र हर्क साम्पाङको नाम उच्चारण गर्दै प्रचण्डले आज त यतिसम्म भन्न भ्याए, होला त यस्तो ?
June 1, 2022 sujaLeaveaComment on बालेन र हर्क साम्पाङको नाम उच्चारण गर्दै प्रचण्डले आज त यतिसम्म भन्न भ्याए, होला त यस्तो ?
काठमाडौँ – यतिबेला देशकै शीर्ष नेताहरुले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर बाजी मारेकाहरुको नाम उच्चारण गर्दै अनेकन टिकाटिप्पणी गर्न थालेका छन् ।यो स्थानिय तहको चुनाव सकिएपछि सडक देखि सदनसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । काठमाडौं महानगरका बालेन्द्र साह उर्फ बालेन देखि धरान उपमहानगरका हर्क राईसम्मको नाम लिएर देशका शीर्ष नेताहरुले अभिव्यक्ती दिन थालेका छन् ।
यसैबीच, ंनेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाह र हर्क साम्पाङले आफ्नो पार्टीको एजेन्डा अघि सारेर निर्वाचनमा बिजयी भएको बताएका छन् । उनले, आज आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधीहरुलाई प्रसिक्षण दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन् । उक्त कार्यक्रमा बोल्दै , प्रचण्डले वालेन र हर्क दलहरुको रास्ट्रीय चुनौतीको रुपमा देखिएको समेत बताएका हुन् ।
हामीले अगाडी सारेका एजेन्डाहरुलाइ हाम्रा प्रतिनिधीहरुले नै लागु गर्न कन्जुस्याई गरेका कारण त्यही एजेन्डालाई वालेन र हर्कले उठाउदा स्वतन्त्र उमेदवारलाई जिताएर मतदाताले आफूहरूलाई सबक सिकाएको बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा शाह र धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा साम्पाङ निर्वाचित भएका थिए। आफूहरूले उठाउँदै आएका विषयलाई बालेन र हर्कले अघि सारेर चुनाव जितेको पनि प्रचण्डको भनाइ थियो। माओवादीले राम्रो काम गर्न नसकेपछि जनताले सबकको रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएको उनले बताए। माओवादीले जनताको सेवा गर्ने, धारा, पानी फोहोर मैला व्यवस्थापन, शोषण, विभेद अन्याय अत्याचार सिध्याउँछौं भनेर हामी भनेको होइन रु’ उनले भने ।
खानेपानी, फोहोरमैलाका मुद्धाहरू पनि आफूहरूले नै उठाएको भन्दै जनताले आफूहरूलाई सबक सिकाएको बताए। उनले बालेन शाह र हर्क साम्पाङ बाहेक अरूलाई स्वतन्त्र उम्मेदवार नमान्ने समेत बताए।
अहिले उनीहरूले पनि त्यसरी नै पानी भनेर पानीको मुहान खोज्दै हिँड्छन्। खानेपानीको समस्या हल गर्ने कुरा धेरै महत्वपूर्ण छ, अरू फोहोरमैला व्यवस्थापनको कुरा या भौतिक पूर्वाधार रूपान्तरणका कुरा। यी सबै त हाम्रा कुरा हुन्,’ उनले भने, ‘हामीले राम्रोसँग गरेको नदेखेपछि ल हेर त तिमीले गर्दैनौं भने हामी यसो गर्दिन्छौं भनेर जनताले नै हामीलाई सबक सिकाएको जस्तो लाग्छ।’
पिउने पानी को मूल्य बढ्यो , कति पुग्यो त जार र पिउने पानीको मुल्य,
अब आफुखुसी घर बनाउन नपाइने ,सरकार तोकेको ठाउँमा।मात्रै घर बनाउन पाइने
लमजुङकी विमला बर्दियाले गरेको काम थाहाँ पाउँदा प्रहरी नै चकित
April 24, 2022 suja
ब्याक टु ब्याक कमाल गर्दै आएका बालेन साहको अर्को योजनाको काम सुरु नहुदै भयो हिट
June 13, 2022 suja
डा. रुइत भन्छन्- स्वस्थ आँखाको लागि ‘२०-२०-२०’ नियमको पालना गर्नु पर्छ, कसरी पालना गर्ने यो नियम ?